Thursday March 05, 2020 - 09:39:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Cudurka Carona wuxuu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Qaaradda Afrika gaar ahaan wadamada ku tiirsan duulimaadyada.
Warbixin ay soo saareen urur ay ku mideysan yihiin shirkadaha diyaaradaha ee Qaaradda Afrika ayaa sheegay in bishii Febraayo ee todobaadkii hore idlaatay ay shirkadahu khasaareen adduun lacageed oo dhan $400 Milyan.
Shirkadaha duulimaadka ee qaaraddan ayaa inta badan u safri jiray dalka Shiinaha waxaana kamid ah kuwa laga leeyahay dalalka Taanzaaniya, Ruwanda, Madagascar, Morocco iyo Kenya kuwaasoo dhammaantood joojiyay dhammaan socdaaladii ay ku tagi jireen dalkaasi.
Dowladaha qaar ayaa duulimaadyadooda u joojiyay si ay uga hor tagaan in cudurka uu soo galo dalalkooda waxaase jira dowlado wali ku dhiiranaya in ay duulimaadyadooda shaqeeyaan kuwaas oo ay kamid tahay Itoobiya.
Illaa iyo hadda wadamada Qaaradda Afrika ee laga helay cudurka Carona ayaa waxay kala yihiin: Nigeria, Masar, Tunisia, Morocco, Senegal iyo Aljeeriya.
Hay’adda WHO ayaa sheegtay in ay aad uga walaacsan tahay wadamo ku yaalla qaaradda oo ay ku tilmaantay inuu adeeggooda caafimaad aad u liito, awoodna aan u lahayn iney iska caabiyaan cudurka.
dhageyso: Xalqada 14 aad dhulalka laboobay ee Muslimiinta sidee loo qabsaday dalka Afrikada dhexe?
Afar kun qof American ah oo saacado kooban gudahood udhintay Carona Virus.